Linux inoda makore gumi kana gumi kutsiva Windows muChina | Linux Vakapindwa muropa
Linux yakaonekwa seyakanakisa sarudzo kune Windows uye yazvino misika data inoratidza kuti iri kugamuchirwa zvakanyanya.
Asi kana iri China, Kugadzira imwe nzira kuWindows kunogona kutora makore gumi, sezvakataurwa naLiu Wenhuan, maneja mukuru weUnited Tech.
Union Tech ndiyo kambani inokura UOS, Linux-based operating system izvo zvinobvumidza China kusiya Windows muchirongwa chenguva refu chine chinangwa chekuwedzera kudzikisira kushandiswa kwesoftware yekunze munyika.
"Zvinotora makore matatu, mashanu kana gumi kuti tikwikwidze nemaitiro ekunze," anodaro Wenhuan.
Iko kuvandudzwa kweinotsiva Windows yeChina kwave kufambira mberi zvishoma nezvishoma. Kunyangwe Union Tech iri mukutaurirana nemakambani emuno kuti zvishandiso zvinotevera zviwirirane neiyi Linux-based operating system, uye zviremera zveChina zvinotarisira kuti Windows ichatsiviwa neinosvika makumi matatu kubva muzana emidziyo inoshandiswa nehurumende.
Zvinoenderana neazvino manhamba, iyo 86.67% emakomputa muChina ari kushandisa Windows, apo 9.94% inoshandisa macOS. Linux inongotora 0.6% yemidziyo.
Kunyangwe isu tisingazive kana Linux ichatsiva Windows muChina, hapana mubvunzo kuti izvozvi inogona kunge iri sisitimu inoshandiswa zuva nezuva pasina matambudziko, uye humbowo hweiyi ndiyo nhamba huru yemasangano pasi rese akaita shanduko kuLinux achisiya Windows. kunze kwezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira mutengo werezinesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux inoda makore gumi kana gumi kutsiva Windows muChina
Ndingadai ndisina kubheja pazera ramakore gumi,
China yaifanira kuve simba renyika muna 2050 uye yatove.
Ne COVID19 chave chiri chakanakisa nekure mukubata nazvo kunyangwe hazvo chiri chekutanga - uye nekuda kwemitemo yenhamba hombe uye maumbirwo emakona, hazvina basa kuti vanoreva nhema zvakanyanya kupfuura mamwe manejimendi -.
Vanga voda kumanikidzwa kutama, uye vachazviita pasina kukurumidza, asi UOS haina kumutswa chete kutsiva MS WOS, Red Hat - IBM iri kudedera, uye zvakanyanya, zvekuti yakatogonesa mumwe wayo Lenovo kuti atange-gadza Fedora apo KUSVIRA Ainge ave kufarira mumusika iwoyo.
UOS ichave iri mumatafura edu, malaptop nemafoni, ichirova MS WOS, IOS, MacOS, ChormeOS uye Android mumusika wepasirese wepasi rose mumakore gumi, asi nguva refu isati yave kukwikwidza kwakakodzera uye nehurongwa hwekutengesa kupfuura izvo zviri maGNU izvozvi. - - kunyangwe isu tichivada zvakanyanya, uye zviri nyore uye zvine simba, tinofanira kuziva kuti chimwe chinhu chinofanira kuzivikanwa kupfuura vamwe uye dzimwe nguva havachiiti chakareruka sevamwe -
Kwenguva refu ... muna 2030 tichaona kuti ndedzipi mhando dzehurongwa hwekushanda huripo, pamwe hapana chekuita nezviripo izvozvi. Vanhu vanogona kutonangana zvakananga kune yepakati komputa (unix muma 70s) akawanda-mushandisi maitiro pasina chero komputa inobatanidzwa. Sezvinei ..
Kuita kuti zvitore nguva shoma, pane mumwe munhu angandibatsira here?
Ini ndiri mutsva kune izvi uye ndoda kuziva kana zvichikwanisika kuwana yazvino Ubuntu yekuvandudza pane yangu Acer aspire 5742g Laptop
Iyo ine 4 GB DDR3 Memory uye 320 GB HDD
Iyo ine Windows 7 imba premium uye ini ndiri kurwara nezvayo isiri kupindura zvachose, ndinoziva kuti ndinogona kuchinjira ku Windows 10 mahara asi ini ndinofunga kuti zvinopfuura matambudziko aisingape
Saka ini ndoda kuchinjira kuLinux.
Pindura kuna Thrash
Edza liveusb, ini ndinokurudzira kuti usashandise Ubuntu nekuti ichave inorema palaptop yako, tarisa zvirinani Kubuntu kana Xubuntu, kana zvirinani edza Linux Mint Xfce kana Mate